Gollaha wasiirada oo shirkoodii maanta uga wada hadlay arimaha amniga iyo abaaraha |
Gollaha wasiirada oo shirkoodii maanta uga wada hadlay arimaha amniga iyo abaaraha
Golaha Wasiirada Xukuumada Federaalka Soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulankoodii caadiga ahaa oo uu shir-guddoominayay Ra’iisal Wasaare Xasan Cali Kheyre. Arrimaha kulanka looga hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa Qorshaha Amniga Qaranka, Abaaraha, iyo dar-dargelinta howlaha dowladda.
Ra’iisal Wasaaraha ayaa sheegay in golaha looga fadhiyo dardargelinta amniga, nabadeynta iyo xasilinta dalka si muwaadin walba uu ugu noolaado si nabad ah si uu uga qeybqaato dardargelinta horumarka dalka.
Wasiirka Gaadiidka & Duulista Hawada ayaa ugu danbeyntii sheegay in ay wadaan qorshe xal loogu helayo arrimaha gaadiidleyda iyo sidii dadka danta yar ay u heli lahaayeen xuquuqdooda aasaasiga ah. Sidoo kale Wasiirka ayaa sheegay in wasaaradu qorshe lagu casriyeynayo howlaha garoonka diyaaradaha ee Muqdisho iyo Duulista hawada, dhowaana golaha hor-keeni doono qorshe dhameystiran ee la xiriira arrimahan.